Alshabaab oo sheegatay inay Qarax is-miidaamin ku dishay Ciidamo uu ku jiro Askari Mareykan ah - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab oo sheegatay inay Qarax is-miidaamin ku dishay Ciidamo uu ku jiro Askari Mareykan ah
ALshabaab ayaa sheegatay weerar ka dhacay degaanka Gandershe ee Gobolka Sh/Hoos, kaasoo ahaa is-miidaamin lagu qaaday ciidamo Soomaali iyo Amrican isugu jiray.
War kasoo baxay Alsahbaab ayaa lagu sheegay in Gaari laga buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday is-miidaamiye lagu weeraray ciidamadan oo ku sugnaa degaanka Gendershe, laguna dilay 5 askari oo uu ku jiro Askari Mareykan ah.
Warka kasoo baxay Alshabaab ayaa u qornaa sidan:”Camaliyad istish-haadi ah oo mujaahidiintu ay ciidamo saliibiyiin iyo murtadiin ah kula beegsadeen deegaanka Gandarshe ayay ku dileen Askari American ah iyo 4 katirsan maleeshiyaadka Alpha Group”.
Ma jiro cid xaqiijisay warka kasoo baxay Alshabaab iyadoo Taliska ciidamada dowladda aanu ka hadlin arrintan.
Previous articleJeo Biden oo Gobol aan la fileyn hoggaanka Codadka kala wareegay Donald Trump iyo Wararkii ugu danbeeyay..
Next articleDEGDEG: Joe Biden oo Hoggaanka u qabtay Gobolkii guusha ee geyn lahaa Aqalka Cad (Natiijadii ugu danbeysay)